Home Ulo oru Europe Max Aaron's Child Story Plus Ihe na-adịghị agbanwe agbanwe akụkọ ndụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha na aha "Max". Ụmụ anyị Max Aarons Akụkọ nke Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Max Aaron's Child Story- The Analysis
Nyocha a gụnyere oge ndụ ya, ndabere ezinụlọ, agụmakwụkwọ / ịrụ ọrụ, ndụ oge mbụ, akụkọ ndụ tupu ama aha, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​ibi ndụ na ihe ndị ọzọ.
Ee, onye ọ bụla maara na Max Aarons bụ otu n'ime ndị kachasị mma ugbu a na-agbachitere na England, onye nwere ike ime karịa karịa na-echebe flanks. Ọ bụ onye na-arụ ọrụ na 18 / 19 oge EFL oge hụrụ nnukwu ụlọ egwuregwu na-arịọ na ikpere ha maka mbinye aka ya. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole tụlere akụkọ banyere Max Aarons bụ nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Max Aaron's Child Story Plus Na-adịghị agbanwe agbanwe akụkọ ndụ Eziokwu - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Malite, aha ya zuru ezu; Maximillian James Aarons. Max, dịka a na-akpọ ya, ọ bụ aha aha. A mụrụ Max Aaron na 4th nke January 2000 nna ya, Mike Aarons na nne (aha a na-amaghị n'oge ederede) na ógbè osimiri nke Hammersmith, London, United Kingdom.
N'ihe gbasara ezinụlọ ya, Max Aarons si n'ezinụlọ agbụrụ dị iche iche na-asụ Bekee na Jamaica. Otu n'ime ndị nne na nna Max Erọn (nna ya) sitere na Kingston, Jamaica ka mama ya si England. Ọhụụ agbụrụ dị iche iche nwere ịhụnanya n'etiti ụmụ nnụnụ hụrụ n'anya na onye anyị hụrụ n'anya Max ghọrọ ngwaahịa.
Ná mmalite, Max Erọn hụrụ onwe ya na-etolite n'otu ezinụlọ na-ahụ bọl, nke sitere na n'akụkụ nna ya. N'ịbụ ndị nwere ezinụlọ na-ahụ n'anya football, ọ bụ ihe dị mma maka egwuregwu ahụ mara mma ka a kụziere na Max. N'oge ọ bụ nwata, Max nwere mmasị igwu egwuregwu ahụ na nwanne ya nwoke bụ Rolando Aarons bụ ndị na-agakarị Bristol na ndị mụrụ ya ka ha bịa leta ezinụlọ ya na Milton Keynes.
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Mgbe ọ na-etolite Milton Keynes, ihe niile Max chọrọ bụ ịghọ ọkachamara ọkachamara, ọ bụghị dọkịta ma ọ bụ injinia. Na mbụ, nne na nna ya kweere na nwa ha nwoke ọ hụrụ n'anya agaghị eme ka ọ ghara ịkụziri ya ọzụzụ. Ha kpebiri itinye aha ya na Shenley Brook End School, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke oge a na Milton Keynes.
Ọbụna mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, ndị nne na nna Max Aaron na-enwe mmasị n'ikike nwa ha na-eme ike na egwuregwu nke mere ka ha kwado nwa ha nwoke, mgbe ha kwụsịrị ịga ụlọ akwụkwọ football. N'ezie, nna Max bụ Mike Aarons bụ onye na-ahụ ya n'anya.
Mgbe o kwusịrị isi nke akwụkwọ agụmakwụkwọ ya, e kwere Max ka ọ malite ịbanye n'ọgba ọsọ. Afọ 2009 bụ oge dị mkpa maka ezinụlọ Aarons. Ọ bụ afọ ma Max ma nwa nwanne nna ya bịara n'ụdị na-agba ọsọ maka ule mmụta na Bristol na Luton Town.
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - Ndụ Ndụ Mmalite
Mgbe nwa nwanne nna ya gara Bristol, Max Aaron na-enwe mmasị maka bọl hụrụ ya ka ọ na-aga ọnwụnwa ma na-edebanye aha ya na mpaghara ndị ntorobịa nke Luton Town FC bụ ndị nyere ohere maka ịtọ ntọala ya.
Max Aarons Early Life na Luton Town FC. Ebe E Si Nweta Twitter
Maka nwa ọ bụla nke hụrụ egwuregwu ahụ n'anya, ọ bụ nrọ ha ịbanye na ụlọ akwụkwọ. Mgbe o jikọtara ya, ọ na-atọ ụtọ maka Max onye ga-esonyere ya na enyi ya na njem ọṅụ ha na agụmakwụkwọ.
Ị maara? ... E nwere oge mgbe Max ga-ahapụ ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ na-atụ anya n'ụlọ ya niile n'ihi na ọ kwadoro ọrụ ya. Ma na-atụgharị n'akụkụ, ọ na-enwe obi ụtọ na ya football.
Mmiri Ndụ Max Ers. Ebe E Si Nweta Twitter
Ná mmalite, Max mere ka echiche ya na ụlọ osisi ya, na-enyere ha aka imeri 2009 enweghị nkwenye- AKWỤKWỌ NDỊ EUROPE Foto dị n'okpuru. O wee gaa n'ihu iji 5 mee ihe na agụmakwụkwọ, na-eme ọganihu dị jụụ ma na-ebuli ọsọ ọsọ ngwa ngwa.
Akụkọ Mmalite Max Erọn Akụkọ
Ị maara?… N'oge ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ, a kpọrọ Max maka ọnwụnwa na Tottenham, Norwich na QPR, ihe na-egosi na ọ bụ ezigbo mma n'ahịa ya.
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - Akpanwu akwukwo akuko
Afọ 2014 hụrụ Max nke na-akpali mmasị na-aga n'ihu na usoro nhazi nke footballing na Norwich, mgbe ọ nwesịrị ikpe ikpe.
Ná mmalite, nwa akwụkwọ 16 dị afọ iri na atọ masịrị ndị nkụzi ntorobịa ya na ike ikuku ya na ma ọ bụ ọzụzụ.
Ụzọ Max Erọn na-aga n'okporo ámá Akụkọ - Echiche na Ụlọ nkwalite ụlọ
Nke a na - eduga na Max na - enweta ụlọ ọrụ ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ, ụgwọ ọrụ dị ukwuu maka ndị na - arụ ọrụ na - arụ ọrụ ike na - enwe nnukwu ikike na àgwà dị oke mma. Mgbe otu afọ nke football ọkachamara, ọrụ Max hụrụ ya ọzọ, na-abanye n'ime òtù mbụ nke Norwich City na ịnweta oku na-akpọ England Under-19 na September 2018.
Site na oge ahụ, Max maara na a ga-eme ya ka ọ buru ya n'elu.
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - Na-ewu ewu Akụkọ
Oge 2018 / 2019 hụrụ Max Erọn ka ọ bụrụ onye kachasị mma na EFL. Na oge ahụ, ọ gara n'ihu nyere ndị otu ya aka na-ebute okpokoro ndị na-agba chaa chaa ma na-emeri trophy EFL na-eme ka a laghachi na United League.
Max Erọn - Akara 2018-2019 Championship. Ebe E Si Nweta 90Min
N'ịbụ onye na-enyere ndị òtù ya aka imeri ọsọ mmeri ahụ, Erọn nọgidere na-emeri E Player Young Year of the Year (2018-2019), EFL Team of Season (2018-2019) na PFA Team of the Year (2018-19).
Max Aarons EFL. Ebe E Si Nweta Twitter.
Na windo mbufe 2019-2020 na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ, Aarons bịara dị ka ihe atụ maka Manchester United mgbe mmasị ha na Aaron Wan-Bissaka jụrụ. Dị ka n'oge edere, ụlọ elu ndị ọzọ esonyere na nchụso ya.
Maka onye nwere ihe mgbaru ọsọ ma na-enyere ya aka n'ime ime ụlọ, o yikarịrị ka Max ga-akwụsị igwu egwu nnukwu ụlọ n'oge na-adịghị anya n'ọdịnihu. Ọ bụ naanị oge. MGBE AHỤRỤ, KA HA KWURU, BỤ N'ỤLỌ NCHE A.
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - Ndụ mmekọrịta
Max Erọn dịka mgbe edere edere eruola afọ ọ ga - eru maka ịlụ nwoke na nwanyị ma nwee enyi nwanyị. N'iburu aha ya elu, o doro anya na ndị Fans karịsịa ụmụ nwanyị ga-ajụ ajụjụ ahụ; Ònye bụ Max Erọn enyi nwanyị?.
Max Aarons Ndụ mmekọrịta
Ọ dịghị ihe ọ bụla na-egosi na Max Eron mara mma na aha ya agaghị eme ka ọ bụrụ otu nwa osisi na-ama n'anya.
Dị ka n'oge ederede, enwere ike inwe nkwanye nzuzo nwere ike maka Max, nke na-agbanahụ nyocha nke ọha mmadụ nanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya na enyi nwanyị ya bụ nke onwe ya na nke enwere ike ịbụ n'efu. Max nwere choro ilekwasị anya n'oru oru ya ma choro izere ihe obula na ndu ya. Eziokwu a na-eme ka o siere anyị ike ịnweta eziokwu banyere ndụ ịhụnanya ya na akụkọ ihe mere eme ya.
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - Ndụ nke Onye
Ịmata Max Aarons ndụ onwe gị ga-enyere gị aka inweta nkọwa zuru ezu banyere ya.
Max Erọn Personal Life. Ebe E Si Nweta FWk
N'aka site na football, Max bụ onye nwere ọgụgụ isi, kwụsiri ike ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya. Onye onye ndu ya na-etinye aka na ime ihe na oge na ilekwasị anya na ibu ọrụ ya.
Ihe nzuzo nke Max Erọn bụ nke ọma na n'eziokwu, dịka onye ọ bụla, ọ nwere ọnọdụ nke onwe ya, nke na-enye ya aka inwe ọganihu dị ukwuu na ndụ ya na nke ndị ọkachamara. Max nwere ikike ahụ iji mee atụmatụ zuru ezu na nke ezi uche maka ndụ ya na ahụ ụtọ ya.
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - LifeStyle
Ego dị ọtụtụ nde pound bụ n'ezie maka Max Aarons ekele maka ọrụ siri ike ya na mkpebi ya ịghọ ọkachamara ọkachamara. Dị ka n'oge ederede, anaghị ekwe Max Aarons ibi ndụ dị mma na-eme ihe dị ka onye nzuzu, na-azụ ụgbọala ma ọ bụ na-agbanwe ndụ ya.
Max Erọn bụ Eziokwu Ndụ. Ebe E Si Nweta mirror.
Ọ bụ ezie na ọ malitere ime nnukwu ego, mana na n'oge ahụ adịghị agafe na-ebi ndụ mara mma. Dị ka ọ dị, Max enweghị nsogbu dị ukwuu na-achịkọta ego ego ya ma na-azọpụta ụfọdụ maka ụbọchị mmiri ozuzo.
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - Ndụ Ezinụlọ
N'ihi ịhụnanya sitere n'aka nnukwu ezinụlọ ya ma site n'England na Jamaica, Max nwere mmetụta dị nro na ihe ọ bụla site n'oge gara aga na nwata ya. Ugbu a ka m na-ede, ọ dịghị ihe ọmụma banyere nwanne (nne) nke Max Aaron (nwanne), nwanne (s) na nne.
Nna nna Max Aaron, Mike, bụ onye na-ahụ ya n'anya, emeela akụkụ dị oké mkpa n'ichepụta ọdịdị onwe ya nwa ya kemgbe ọtụtụ afọ. Ezinụlọ Erọn bụ otu n'ime ezinụlọ ndị a ma ama na ezinụlọ Jamaica na Bekee, bụ ndị dere nnukwu ihe ịga nke ọma n'egwuregwu football na ekele Max na nwa nwanne ya bụ Rolando.
Max Aarons Cousin-Rolando Aarons. Ebe E Si Nweta Premier League
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - Eziokwu Na-ezighị ezi
Ọ bụ 'efu' onye nyocha:
Akụkụ nke ọzọ nke Max Aarons. Ebe E Si Nweta East Anglian Daily Times,SamfordCrimson News na Eastern Daily Press
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịma Max site na ọsọ na omume nke ma nchebe na ọgụ. Ikekwe, ị nwere ike ọ gaghị ama n'akụkụ nke ọzọ. Max Aarons bụ ndị na-akwado ụkwụ ọ bụla na-ezere ụdị 'nzuzu' karịsịa site na nnukwu egwuregwu ndị na-abịa n'ụzọ ya.
Mgbe ụfọdụ, mmetụta onye na-akpọ onye ọkpụkpọ ahụ na-eburu n'uche ya ka iwe na-agbagha mgbagha nke na-eduga n'inwe ihe na ịlụ ọgụ n'ọhịa. MA ka anyị bụrụ ndị eziokwu, ndị na-agbachitere ndị mmekọ Premiya ga-ahụ ịhụ mmasi ahụ na-achịkwaghị achịkwa na-apụ n'otu oge.
Max Erọn Nwatakịrị Akụkọ Akụkọ Na - adịghị Eke Ọhụụ - Video Nchịkọta
Biko chọta n'okpuru ebe a, vidio vidio YouTube maka profaịlụ a. Obiọma Gaa na Ndenye aha anyị Youtube ọwa wee pịa Amaokwu Bell maka Ịma Ọkwa.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Max Maxs Childhood akụkọ ya na akụkọ na-adịghị mma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Reiss Nelson Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Banyere Ndụ Eziokwu